Howlaha Cilmi baarista ee Dhismaha Tiyaatarka Rotssweil wuxuu bilaabmay | RayHaber | raillynews
HomeDUNIDAYURUB49 JarmalkaThyssenkrupp Waxqabadyada Cilmi baarista ee Kuleejka Baaritaanka Rottweil
27 / 12 / 2016 49 Jarmalka, YURUB, DUNIDA, tareenka, GUUD
thyssenkrupp waxay sii wadaa inay kordhiso waxqabadyada ganacsiga ee la xidhiidha wiishka iyo inay u wareejiso warshadaha wiishka ee cilmiga R & D si loo sameeyo minaaradda tijaabada ee Rottweil.
Magaaladu waxay ku foori karaan dad badan oo sii kordhaya iyo kaabayaasha xadidan; Dhaqdhaqaaqyada dhismayaasha ayaa kaalin muhiim ah ka qaata koritaanka joogtada ah ee magaalooyinka. Dhaqdhaqaaqa cilmibaarista ayaa ka bilaabmay munaaraddii magaalada magaalada taariikhiga ah ee Baden-Württemberg oo ah mawduuc isbedel ah oo ka soo horjeeda dhibaatooyinka magaaleynta.
Andreas Schierenbeck, oo ah maamulaha shirkadda Thyssenkrupp Elevator, ayaa sharraxaysa: uc Iyadoo ay sababtay hirgalintii xalinta macmiilka MAX iyo isdhexgalka Microsoft ee HoloLens hababkeenna adeegga, 150-ta ugu dambeysay wax isbeddel ah kama aysan dhigin sanad-kii XNUMX ee ugu dambeeyey. Waxaan aragnay in xitaa qaybaha, hal-abuurka iyo dhijitelinta ay u horseedi karaan is-beddel dhab ah. Hadda, mashiinka baaritaanka Rottweil, waxaan xoojineynaa dhamaan howlaheena asaasiga ah, oo ay ka mid yihiin wax soosaarka wiishka, iyada oo la adeegsanayo xalal usameynaya, taas oo dib u qaabaynaysa dhaqdhaqaaqyada magaalooyinka isla markaana magaalooyin ka dhigaan meelo ugu wanaagsan ee lagu noolaado. "
Xalalkaas waxaa ka mid ah MULTI loogu talagalay nidaamkan cusub ee wiishka, kaas oo lagu tijaabin doono waqti gaaban oo ku yaal 12 si fiican ee mashiinka tijaabada ee Rottweil. Wixii tareenka Transrapid loo isticmaalo qulqulatooyinka qadka toosan, tiknoolajiyada qulqulka mashiinka lagu hormariyo ayaa loo adeegsadaa, kaas oo bixiya faa'iidooyin badan: Qalab dhismaha xadhigga ah ayaa u oggolaanaya xayawaannada badan ee kor u qaadaya inay ku wareegaan hal ceel. Marka sidan, inta ay kor u qaadayaan awoodda rarida, badhitaanka shidaalka ee dhismaha ayaa yaraaday. Maadaama ay wiishayaashu ay u guuri karaan dhinac aan lahayn wax xaddidaad ah, MULTI waxay bixisaa fursado aan horay loo arag ee naqshadeynta iyo dhismaha dhismayaasha.
Iyada oo tilmaamaysa baahida loo qabo xeeladaha gaadiidka oo si deg deg ah oo wax ku ool u ah dhismayaasha, sharcigan qabyada ah ee Dawladda Federaalka ee Jarmalka wuxuu ku talajiraa dib-u-eegis xayiraadihii hore. Waxaa la tilmaamay in dhismayaasha deegaannada la dhisi doono si aad u sarreeya lana dhisto si joogto ah si loo helo xal loo helo guryaha aan ku filnayn ee magaalooyinka ah iyo in la abuuro degaanno badan oo nool. Marka la eego, injineerada thyssenkrupp waxay diiradda saartaa xargaha kabaha caadiga ah ee mitirka 64,8, oo ah xajmiga xNUMX km saacaddii.
Rugta shaqada ee R & D ayaa si rasmi ah u bilaabi doonta wareejinta munaarad ka socota qandaraaslaha guud ee Zublin ilaa thyssenkrupp. Iyadoo bilawga shaqada, dhammaan noocyada casriga ee wiishka ayaa hadda la tijaabin karaa loona aqoonsan karaa warshad Rottweil ka hor inta aan la hirgelin magaalooyinka caalamiga ah. Iyadoo la tixgelinayo doorka muhiimka ah ee soo saarista tiknoolajiyada wiishka, thyssenkrupp ayaa hubisay in minaaradda tijaabada lagu wareejiyay si sax ah sidii loo qorsheeyay lana raacay miisaaniyadda qorshaysan.
1950, dadweynaha miyiga waxay ka dhigeen% 70 ee dadka adduunka. 2050 dadka magaaladu waxay u dhawyihiin boqolkiiba isku mid ah. Sidaa darteed, magaalooyinku waxay noqon doonaan xarumaha dhaqaalaha adduunka. Maaddaama ay magaalooyinku koraan, boosku wuxuu noqonayaa mid xadidan, taasoo micnaheedu yahay ballaadhintu waa hal dhinac. Faa'iidooyinka dhaqaale iyo dhaqaale ee dhismayaasha dhaadheer, oo ka baxaya raadadka yar oo u oggolaanaya goobo cagaaran oo caan ah, ayaa lagu ogaadey inay tahay arrin wax ku ool ah oo ku saabsan horumarinta magaalooyinka waaweyn. Ma aha oo kaliya tirada tirada dhismayaasha dhaadheer. isla mar ahaantaana, dhererkooda celceliska wuxuu ka badan yahay dhammaan filashooyinka. Dhamaadka 2015, celceliska dhererka dhismaha 100 ee adduunka ugu sarreeya wuxuu ahaa ilaa mitirka 357. Iyadoo la tixgelinayo in dhererkani yahay mitirka 2000 ee 285, waxaa loo arkaa in 15 ay arkeen kor u kaca ah sida mitirka 70 sanado badan.
Andreas Schierenbeck ayaa sheegtay in si loo hubiyo in dadku si fudud iyo raaxo leh u gaari karaan qaab-dhismeedka deg dega ah ee isbeddelka, tallaabooyin cusub oo hal-abuur ah ayaa si deg-deg ah loogu baahan yahay wershadda wershadda: "Waqtiga ayaa weli ah hanti qiimo leh. Waxaan magaalada ka taageernaa si looga hortago dadka degan waqtigooda wakhti xaadirka ah sababtoo ah ciriiriga iyo xad-dhaafka. Yss Waxyaabo cusub oo ay ka mid yihiin MULTI, alaabooyinka sida suunka socodka ee ACCEL, taas oo yaraynaysa ciriiriga iyo hagaajinta socodka dadka dhismayaasha, iyo sidoo kale isku dhafka MAX iyo HoloLens si loo xaqiijiyo hawlgal aan kala go 'lahayn nidaamka dhaqdhaqaaqa, ayaa si joogto ah ugu cusbooneysiiya gaadiidka magaalooyinka.
Minaallada baaritaanka Thyssenkrupp ee Rottweil: Xaqiiqooyinka iyo faahfaahinta
• Mitirka 246-mida sare ee Rottweil waa dhismaha ugu dheer ee Baden-Wurttemberg. Muuqaalka Stuttgart TV, dhismaha labaad ee ugu dheer gobolka, wuxuu raacayaa mitirka 217.
• mitirka 232 waa kan ugu sareeya ee Jarmalka ku yaala arimahan. Halkaa waxaa ku yaalla Tower of Europe-ga sareeya (Europaturm) ee Frankfurt.
• Thyssenkrupp waxay maalgelisay € 40 ee machadka cilmi baarista mustaqbalka.
• Dhererka ceelasha imtixaanka ee mashiinka tijaabada ee wiishka waa 2,1 km marka la xisaabiyo. Sidaa daraadeed, haddii ceelasha ku yaala mooska, waxaa ay noqonayaan siddeed jeer ka sarreeya heerka dhererkooda, iyo waxay noqoneysaa laba jeer oo ka sarreeya sida Jiddah Tower (1007 mitirka) ee Sacuudi Carabiya, dhismaha ugu dheer dhismaha hadda jira.
• Miisaanka guud ee munaaradku waa 40 kun tan. Tani waxay la mid tahay miisaanka 8000 Afrikaan maroodi ah.
• Wadarta dhismaha 15 mitirka dhererka iyo 2500 oo ah qalabka birta loo isticmaalo. Qadarka birta la isticmaalo ayaa u dhiganta qaddarka ay isticmaalaan thyssenkrupp si ay u noqoto mid casri ah oo ay Duisburg maalin walba soo saarto.
• Miisaanka dhismuhu wuxuu ku dhowaadaa 118 kun mitir dherer. Haddii aan qiyaasno minaaradda tijaabada ah ee loo yaqaan 'pint,' 20 waxay lahaan doontaa sheeko ku filan Oktoberfest.
• Nidaamka oo dhan laga bilaabo munaasabaddii ugu horraysay ee munaasabadda xafladda furitaanka waxay qaadatay wax ka yar toban bilood. Si kale haddii loo dhigo, 245 oo kaliya ayaa laga bilaabo eber oo saldhigga minaaradda inta lagu jiro maalinta iyo hoos udhigga mitirka -32; markaa mar labaad ilaa mitirka 232.
• Maalmo maalmo ah minaaradda ayaa kordhisay mitirka 5 maalintii. Sidaas awgeed waxay kor u qaadday shan jeer oo ka sarraysa noocyada bambo ee qaar ka mid ah. Celcelis ahaan, dhererku wuxuu kordhay mitirka 3,5 maalintii.
• Dharka dibadda wuxuu ka kooban yahay wadarta 1000 mitir oo laba jibbaaran oo 17 ah. Tani waxay u dhigantaa laba garoon kubadeed.
• Mawjada waxaa loo isticmaali doonaa jawi khaas ah oo loogu talagalay MULTI, nidaamkii ugu horreeyay ee xadhig la'aanta adduunka. Saddexda ceel ee isku xiran waxay u ogolaanayaan wiishada sare ee sare inay u wareegto minaaradda.
• Waxaa jira laba laydh oo hadda ka shaqeynaya mashiinka baaritaanka (12 / 12 / 2016): Qalabka dabiiciga ah oo leh laydhka dabka u adkaysta iyo helitaanka hannaanka safarka, kaas oo gaari kara xawaaraha 4 halkii ilbiriqsi. Waxaad ku riyaaqi kartaa aragtida sida ugu dhakhsaha badan ee aad u hesho wiishka, kaas oo gaari kara mitirada 8 halkii labaad (29 km / h) waxayna ka kooban tahay derbiyada muraayadda.
• Laydhka ugu dhakhsaha badan ee mashiinka tijaabada ah ayaa markaa ka shaqeyn doona ceelka si loo gaaro mitirka 18 halkii labaad (65 km / h). Taasi waa labo jeer sida ugu dhakhsaha badan sida rikoorka adduunka Usain Bolt.
• Nijeerku wuxuu ka kooban yahay tallaabooyinka 1500. Diiwaanka rasmiga ah ee 32 wuxuu hadda yahay daqiiqado ah socodka munaaradaha tijaabada ah (laga bilaabo mitirada 232 iyo dhamaadka mitirka 15).
Tababarka Xarumaha Cilmi-baarista iyo Xarunta Tareenka ee Qaranka
Xarunta Cilmi-baarista iyo Xarunta Tareenka
Maanta taariikhda: 5 Febraayo 1850 Dhaqdhaqaaqyada dhismaha ee ugu horreeya dhismaha ee Boqortooyada Ciraaq ayaa bilaabmay
ThyssenKrupp Gft Gleistechnik si ay u bixiso ganaaxyada kartuunnada jidka
ThyssenKrupp wiishka siin doonaa wiishka ee tareenada ee Turkey
ThyssenKrupp ayaa dejin doona kor u qaadayaasha iyo wiishashka mashruuca Marmaray!
Wiishka Rafaa ThyssenKrupp wiishka jecel adag ee Turkey
thyssenkrupp Elevator, bartilmaameedyada yaryar
thyssenkrupp SEED Campus - Xarunta Tababarka ayaa la furay
Giant Jarmal Thyssenkrupp wiishka Factory ka furmay Turkey
Hawlaha Ammaanka ee TCDD